Shir muhiim u ah Soomaaliya oo ka furmay magaalada Addis Ababa+Sawirro - Bandhiga Media
Mas’uuliyiin sar sare oo ka socota xukuumadda Fedetalka Soomaaliya, madax katirsan hey’adda Lacagta Aduunka ee IMF ayaa maanta shir wuxuu uga furmay magaalada Addis Ababa ee dalka Itoobiya.
Shirkan oo muhiim u ah deyn cafinta Soomaaliya waxaa ka qeyb galaya Wasiirka Wasaaradda Maaliyada Cabdiraxmaan Ducaale Beyle,Wasiirka Qorsheynta Jamaal Maxamed Xasan, xubno ka tirsan Bangiga Dhexe iyo labada Xafiis ee Madaxweynaha iyo Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya.
Dowladda Federalka ayaa shirkan ku soo bandhigi doonta wixii u qabsoomay 3-Bilood ee la soo dhaafay iyo in ay ku dadaasho sidii ay u sii horumarin laheyd Maamul wanaaga Maaliyadda Dalka.
“Markale ayaan fileynaa in ay soo baxdo natiijo wax ku ool ah oo muujineysa guusha iyo horumarka dhaqaalaha Soomaaliya”ayuu yiri Wasiirka Maaliyadda Soomaaliya.
Shirkan ayaa la filayaa in laga soo saaro natiijooyin la xiriira hanaanka deynta Soomaaliya oo heer gabo gabo ah maraya.